Zodiac ee hurdada ayaa ka soo kiciya kansarka illaa maktabadda ilaa xijaabka; zodiac ee hurdada laga soo bilaabo xididada loo yaqaan 'capricorn' ilaa murqaha iyo kansarka.
Vol. 6 NOVEMBER, 1907. No. 2
'SLEEP' waa shay caan ah oo inta badan aan badnayn ama aan waligeen tixgalinayn waxa ifafaale yaabka leh ama qaybta aan qarsoodiga ahayn ee ay ku ciyaarayso jiritaankeena. Saddex meelood meel nolosheena waxaan ku seexdaa hurdo. Haddaan ku noolaannay lixdan sano waxaan ku qaadan lahayn labaatan sano muddadaas hurdada. Carruur ahaan waxaan ku seexanay wax kabadan seddex-meelood meel afartii iyo labaatanka saacadood, iyo, sida dhallaanka, waxay seexan jireen in kabadan nus maalmaheena.
Wax kasta oo ka jira waax kasta iyo boqortooyada dabiiciga ah way seexdaan, oo wax kasta oo ka hooseeya shuruucda dabeecadda ma seexan karaan hurdo la'aan. Dabeecaddu way seexdaa. Caalamka, ragga, dhirta iyo macdanaha, waxay u baahan yihiin hurdo si ay howshoodu u sii socdaan. Waqtiga hurdada waa waqtiga dabiiciga ah ee ka nasto howlaha ka soo baxa. Waqtiga hurdada dabeecadda ayaa hagaajineysa waxyeellada ku soo gaartay xayawaankeeda dusha sare ee kacsan, iyo duugista iyo jeexa nolosha.
Waxaan nahay kuwa aan mahadnaqinayn ee aan u seexanno faa'iidooyinka weyn ee aan ka helno halkaa. Waxaan inta badan ka qoomameyneynaa waqtiga aan ku seexanno hurdada annaga oo sidii wax lumay; halka, hadduusan ahayn hurdo, ma aha inaan kaliya ku sii adkaysan karno arrimahayaga nolosha, laakiin waa inaan luminaa faa'iidooyinka weyn ee aan ka helno dhulka aan la arki karin oo aan aad u yar is naqaanno.
Haddii aan wax badan baranay hurdada, halkii aan ka yarayn lahayn waqtiga lumay, ama aan ugu dulqaadanno sidii shardi daruuriga ah, waa inaanu la galno xidhiidh dhow oo aan la lahaanno adduunkan aan muuqan ee aan hadda ku taaganahay, iyo waxa aan ka baranayno ay sharxi lahayd. qaar badan oo ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee nolosha jidh ahaaneed.
Xilliga hurdada iyo soo jeedku waa astaan ​​u ah nolosha iyo xaaladaha dhimashada ka dib. Nolosha soo toosi ee maalin waa astaan ​​ka mid ah nolosha dhulka. Ka soo kacidda hurdada habeenkii iyo u diyaargarowga shaqada maalinta waxay la mid tahay nolosha carruurnimada iyo u diyaarinta shaqada nolosha. Ka dib waxaa imaanaaya danaha, waajibaadka iyo waajibaadka nolosha guriga, nolosha ganacsiga, dhalashada iyo dowladnimada, ka dibna da 'weyn. Taas ka dib hurdada dheer ee waxa aynu hadda ugu yeedhnaa dhimashada, laakiin taasi runtii waa nasashada iyo u diyaargarowga shaqada kale ee nolosha, xitaa sida hurdada ay noo diyaariso maalinta soo socota. Hurdada dheer waxaan ku xasuusaneynaa waxba kama jiraan nolosha maalinta, daryeelka jirka, mana ahan illaa iyo inta aan ku soo laabano nolosha soo nooleynta ayaa ah daryeeladan mar kale la qaaday. Waxaan dunida ugu dhimannay markii aan hurdo dheer ku jirno sidii jirkii qabriga ku jiray ama dambas u rogmaday.
Waxa maalin walba na isku xidha waa qaab jidhka ka mid ah, kaas oo si weyn u soo jiitay xusuusta maalintii hore. Markaa kadib hurdada kadib waxaan helnay sawirradan ama xusuusta naga sugeysa albaabka nolosha, oo annaga oo u aqoonsan inay iyagu yihiin waxaan sii wadaynaa dhismaha sawirkeena. Farqiga udhaxeeya dhimashada iyo hurdada laxiriirta adduunkan waa inaan helno jirka oo inaga sugaya ku soo laabashadeena aduunka ka dib hurdada, halka dhimashada ka dib waxaan helnaa jir cusub oo aan ku qasbanaanay inaan tabobarno oo aan horumarno halkii aan ka heli laheyn mid diyaar u ah mustaqbalkeena. isticmaal.
Atamka, molikulalka, unugyada, xubnaha iyo jirka oo abaabulan, mid walbaa waa inuu lahaadaa waqtigiisa nasashada iyo hurdada si ururka oo dhan uu u sii socdo sida. Midkastaba waa inuu lahaadaa waqti nasasho ah oo waafaqsan shaqadiisa.
Wax kasta oo dunida ku sugan ayaa miyir qaba, laakiin shay kasta wuxuu ku baraarugsan yahay diyaaraddiisa, iyo marka loo eego heerka ay ku egtahay howlaheeda. Jirka aadanaha guud ahaan wuxuu leeyahay mabda 'miyir leh kaas oo isku dubbarida, taageerana kuna dhex gala xubnaha iyo qeybaha jirka. Qeyb kasta oo jirka ka mid ah waxay leedahay mabda 'miyir leh oo qabata oo kujirta unugyadeeda. Unug kasta wuxuu leeyahay mabda 'miyir leh oo qaabeeya moleekulada ku dhex jira gudaha. Moleekule kasta wuxuu leeyahay mabda 'miyir leh oo soo jiidata atomka walxaha ka jira oo ka dhigaya inay diiradda saaraan. Atom kasta wuxuu leeyahay mabda 'miyir qabo oo ah ruuxa astaamaha uu ka tirsanyahay. Laakiin atom wuxuu yahay miyir-doorsoon kaliya marka ay u shaqeyso sidii unug diyaaradeed oo ah atom ayado loo eegaayo nooca atom ay tahay, iyo walxaha atomiga ee ay kujirto. Tusaale ahaan, diyaaradda mabda'a miyirka ee atomboonka kaarboonku waa mabda'a miyir-qabka ee walxaha, laakiin nooca gaarka ah ee miyirka leh ee sheyga waa kaarboon, iyo heerka ay u tahay mabda'a aasaasiga ah ee miyir-qabka ayaa ku xidhan sida ay u shaqeyso nashaad u ah kaarboonka. Sidaasi darteed dhammaan walxaha leh mid walboo mabda 'miyir u gaar ah kaasoo ah ruuxa aasaaska. Ilaa iyo inta Atom uu ku sii jiro nuxurka aasaaska waxaa ku hagaya mabda'a miyirka ee maadada uu ka tirsanyahay, laakiin markay gasho isku darka maadooyinka kale, waxaa xakamaynaya mabaadiida miyirka oo ka duwan lafteeda, wali sida atomka kaarboonka ah waxay qabataa shaqada kaarboon.
Atamku waa walxaha aan la arki karin ee maaddooyinka-sheyga kuwaas oo isu gelaya si waafaqsan mabda'a miyir-qabka ee qaab ama qaab. Mabda 'miyirka leh ee moleeku u shaqeeyo sida naqshad ama qaab. Mabda 'noocan ah ee naqshad ama qaab ayaa soo jiidata atomyada lagama maarmaanka u ah naqshadeynteeda, iyo atomyada, mid walboo ku shaqeynaya iyada oo loo eegayo aasaaska u gaarka ah ama mabda'a miyirka ah, adeeca sharciga soo jiidashada mid walbana wuxuu galaa iskudarka iyo qaabeynta, jiheynta iyo haynta diirada mabda'a miyir-qabka Tani waa saameynta ugu weyn ee boqortooyadda macdanta oo dhan, oo ah tallaabada ugu dambeysa laga soo bilaabo adduunka jismiga aan la arki karin illaa dunida jireed ee muuqata iyo tallaabada ugu horeysa ee korka muuqata. Mabda 'miyirka ee naqshadda ama qaabka ayaa weligiis sii jiri doona iyada oo aan loo eegin mabda'a miyir-qabka ee nolosha, shaqada oo ah ballaarinta, koritaanka. Mabda 'miyir-qabka ah ee nolosha ayaa ku dhexdhaca molikulada waxayna u horseedaa inuu sii weynaado oo uu weynaado, sidaa darteed qaabka iyo qaabeynta molecule-ka ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo baxa naqshadda iyo qaabka unugga. Shaqada mabda'a miyirka ee unuggu waa nolosha, fidinta, kobaca. Mabda'a miyirka ee xubin waa rabitaan. Rabitaankani wuxuu kooxayaa unugyada, wuxuu u jiheeyaa nafsadiisa wax kasta oo ku hoos yimaadda saameyntiisa wuxuuna ka hortagaa dhammaan isbeddelada aan ka ahayn ficilkiisa. Shaqada mabaadiida miyirka leh ee dhammaan xubnaha waa rabitaan; unug kasta wuxuu u dhaqmaa si waafaqsan mabda 'miyirkiisa u shaqeynaya wuxuuna iska caabiyaa ficillada xubnaha kale oo dhan sidaa darteed, sida kiiska atom ee qaybaha kaladuwan ee ku wada shaqeynaya mabaadiida miyir-qabka ee moodeelka u qaabeeyey, hadda waxaa jira a isku dubbaridida mabda'a miyir-qabka ah ee jirka, kaas oo isku xira xubnaha oo dhan si isku mid ah. Isuduwidda mabda'a mihiimka ah ee qaabka jirka guud ahaanba wuxuu xukumaa unugyada wuxuuna ku qasbaa inay wax wada qabtaan, in kasta oo mid waliba u dhaqmayo si waafaqsan mabda 'miyirkiisa. Unug kasta oo iskiis ah wuxuu hayaa unugyada ay ka kooban yihiin, mid walbana unugyada ka qabta shaqadiisa gooni ah qeybta. Unug kasta ayaa iskiis u xakameeya moleekulada dhexdooda; molecule kasta wuxuu hayaa atomyada ay ka koobantahay diirada, iyo qaanso kasta waxay u dhaqmaysaa si waafaqsan mabda 'miyir qabka leh, taas oo ah sheyga ay iska leedahay.
Markaa waxaan leenahay jir bini’aadamka oo ay kujiraan dhammaan boqortooyooyinka dabeecadda: aasaasiga ah oo ay matalaan atomyada, molikalku u taagan yahay macdanta, unugyada u koraya sida khudradda, unuggu wuxuu u dhaqmaa sidii xayawaan, mid walbana sida uu yahay. Mabda 'kasta oo miyir leh ayaa ka warqabta shaqadeeda kaliya. Atomku kama warqabo shaqada molecule, unuggu ma ka warqabo shaqada unugga, unuggu kama warqabo shaqada xubnaha, unuguna ma fahamsana howlaha ururka. Markaa waxaan aragnaa dhammaan mabaadi'da miyir qabka leh ee sifiican ugu shaqeynaya midwalba diyaaraddiisa.
Waqtiga nasashada ee atom waa waqtiga ay mabaadii'da miyir-qabka ee molikulada ay joogsato inay shaqeyso oo ay xoreyso atomka. Waqtiga nasashada ee moleeku waxaay imaaneysaa markii mabaadii'da miyir-qabka ee nolosha laga noqdo oo ay shaqadii ka joogsato iyo markii noloshu ka baxdo molecule-ga sidii uu ahaan jiray. Waqtiga nasashada ee unuggu wuxuu yimaadaa marka mabda'a miyirka leh ee rabitaanku joogsato iska caabinteeda. Waqtiga nasashada ee xubin waa waqtiga marka isku-dubbaridida mabda'a miyir ee jirka uu joojiyo shaqadiisa oo u oggolaado xubnaha mid kasta inuu u dhaqmo qaabkiisa, kuna nasto qaabka isku-duwaha ee jirka uu yimaado marka mabda'a miyir-qabka ee bini-aadamka uu yahay. Waxay ka baxday gacanta jirka waxayna u ogolaaneysaa inay ku nasato dhamaan qeybaha ay ka kooban tahay.
Hurdadu waa shaqo cayiman oo mabaadi'da miyirka leh ee gaarka ah oo hagaysa inay noqoto ama wax ku jira boqortooyo kasta oo dabiiciga ah. Hurdadu waa gobolka ama xaaladda mabda'a miyir-qabka ah, oo ka joogsata inay ku shaqeyso diyaaraddeeda kaligeed, waxay ka horjoogsataa in maaddada ay shaqeyso.
Hurdadu waa mugdi. Binu-aadamka, hurdada, ama gudcurka, waa shaqada maskaxda ka jirta ee ku fidaysa saameynteeda howlaha kale iyo awoodaha oo ka hortagaysa ficilkooda miyir-qabka ah.
Marka maskaxda taas oo ah mabda'a ugu weyn ee miyir-qabka ah ee jidhka xayawaanka jidhka ahi uu ku sii dhex shaqeynayo ama la adeegsanayo jidhkaas, dhammaan qaybaha jidhka, iyo guud ahaanba, waxay ka jawaabtaa fikirka maskaxda, si maskax ahaan u maamusho, awooda iyo caqliga ayaa loo hayaa isticmaalkeeda iyo dhamaan shaqaaluhu ee jirka ku jira waa inay ka jawaabaan. Laakiin jidhku wuu jawaabi karaa oo keliya muddo.
Hurdadu waxay timaadaa markay waaxyaha kaladuwan ee jidhka ay daalan yihiin oo ay daalaan waxqabadka maalinta mana u jawaabi karaan awooda maskaxda, sidaa darteedna shaqada maskaxda ee hurda ayaa la waayayaa. Mabda 'sababaynta ayaa markaa luminaysa awooddeeda. Xiraduhu ma awoodaan inay xukumaan dareenka jidheed, dareenka jidhka ayaa joogsanaya inuu qabto xubnaha, jirkuna wuxuu uboodayaa nuxurka. Markuu mabaadiida miyirka ee maskaxdu ka joogsatay inuu ku shaqeysto awoodaha maskaxda isla markaana uu ka baxo shaqadiisa, hurdo ayaa dhacday oo mabaadiida miyirku kama warqabo adduunka xasaasiga ah. Marka lagu jiro hurdada mabaadiida miyir-qabka ee dadku waxay noqon kartaa mid dagan oo xirmo jahwareer mugdi ah ama haddii kale waxaa laga yaabaa inuu u dhaqmo diyaarad ka sarreysa nolosha xasaasiga ah.
Sababta ka noqoshada mabda'a miyirka waxaa lagu arki doonaa daraasad ku saabsan hurdada jirdhiska. Moleekule kasta, unug, xubin ka mid ah jirka iyo jirka guud ahaanba, wuxuu mid walba qabtaa shaqadiisa u gaarka ah; laakiin mid walbaa wuxuu shaqeyn karaa waqti cayiman, oo mudada waxaa go'aaminaya waajibaadka midkastoo jira. Markuu dhammaadka muddada shaqadu soo dhowaado kama jawaabi karto saamaynta xoogga leh ee ka sarraysa, karti-darrida shaqadeedu waxay sheegaysaa saamaynta ay ku leedahay awood la’aanteeda iyo saamaynta ay ku yeelanayso mabaadii'da miyir-qabka ee ka sarreysa. Midkasta oo u dhaqma si ku habboon dabeecadiisa, astaamaha, unugyada, unugyada iyo xubnaha jirka ee xayawaan, wuxuu ogeysiinayaa maamulaha isku dubarida mabda'a miyir qabka ah ee jirka waqtiga waqtiga nasashada sida ku qeexan dabeecadda mid kasta, ka dibna mid kasta oo xakameeya mabda'a miyirka ah wuxuu ka noqdaa saameyntiisa wuxuuna u oggolaadaa midka ka hooseeya inuu nasiyo. Tani waa waxa ka dhaca waxa loo yaqaan hurdo caadi ah.
Mabda 'miyir qabka ah ee bani'aadamka wuxuu leeyahay xaruntiisa madaxa, in kasta oo uu ku fidsan yahay jirka oo dhan. In kasta oo ay ku sii jirto madaxa ninku ma hurdo in kasta oo laga yaabo in aanu ka warqabin waxyaalaha ku xeeran, laakiin jirku si fiican u deggan yahay. Mabda 'miyir qabka ah ee ninku waa inuu madaxa ka tago oo jirka dhex galiyaa kahor intaysan hurdo imaan. Midka qallafsan markuu fadhiyo ama fadhiisanayo ma hurdo. Midkii ku riyooda, in kasta oo jirkiisu si fiican u deggan yahay, ma hurdo. Hurdada loogu talagalay ninka caadiga ah waa illoobin buuxda ee wax walba.
Calaamadaha ugu horreeya ee baahida hurdo waa karti la’aanta feejignaanta, ka dib waxaa laalaada qaylida, liidashada ama caajisnimada jirka. Muruqyadu way is xasiliyaan, oo indhahoodu way xirmaan, oo ishuhu kor bay soo baxayaan. Tani waxay muujineysaa in mabda'a miyirku uu ka tanaasulay xakameynta isuduwidda muruqyada jirka. Mabda'a miyirka ee ninku wuxuu ka gooyaa kursigiisa jir ahaaneed ee jirka, kaas oo ah xarunta xukuma nidaamka neerfaha ee jirka jirkiisa, ama haddii kale xaruntani waa mid daallan oo aan adkeysan karin. Markaa haddii aysan jirin wax danta ka nuugaysa maskaxda, waxay ka baxdaa kursigeedii ay ku fadhiisatay ee maskaxda, nidaamka neerfaha ayaa gabi ahaanba xasilloon.
Haddii illowsiga wax walba yimaado markaa mid baa la dhihi karaa waa hurdaa, laakiin haddii dowlad miyir qabta ay jirto, ama riyo nooc kasta ha noqotee, ka dib hurdadu ma imaan, waayo mabaadiida miyir-qabka ee maskaxda ayaa wali madaxa ku jira oo waa la qaatay dareenka mawduuca halkii laga lahaa ujeedka, kaas oo ah mid kaliya looga saarayo dhinaca hurdada.
Riyo ahaan mabda'a miyirku wuxuu la xiriiraa socodka dareemeyaasha ee saameeya isha, dhegta, sanka, iyo afka, iyo riyada waxyaabaha ku xiran dareenkaas. Haddii qayb ka mid ah jirkaaga ay wax yeeleeyaan, jirranyihiin, ama dhaawacanyihiin, ama shaqada lagu soo rogay, waxaa suuragal ah inay qabta dareenka mabda'a miyirka oo ay riyo u keento. Haddii, tusaale ahaan, ay jirto xanuun lugta ah, waxay saameyn ku yeelan doontaa xarumaha u dhigma ee maskaxda, kuwanna waxay ku ridi karaan sawirro la buunbuuniyey ka hor inta aan la gaarin mabaadiida miyir-qabka ee maskaxda ee la xiriirta qaybta ay saamaysay; ama haddii cuntada la cuno oo calooshu aysan isticmaali karin, sida tusaale ahaan dhibka welsh rarebit, maskaxda ayaa saameyn doonta dhammaan nooc kasta oo sawirro qaawan ayaa maskaxda lagu soo jeedin karaa. Dareenka kastaa wuxuu leeyahay xubin qeexan oo madaxa ah, iyo mabda'a miyirku wuxuu la xiriiraa xarumahaan iyadoo loo marayo dareemayaasha u horseedaya, iyo xiriir xasaasiyadeed. Haddii xubin ka mid ah xubnahaas lagu dhaqmo, waxay qabanayaan feejignaanta miyirka, hurdadiina ma imaan doonto. Markii mid uu riyoodo, mabda'a miyirku wuxuu ku yaal madaxa, ama wuxuu u weecday qeybta qaybta laf-dhabarka ee ku taal marinka xubinta taranka dumarka. Ilaa iyo inta qofku mid riyoonayo riyada caadiga ah, mabda'a miyirku kama sii fog yahay xadhigga laf-dhabarka ee qaybta sare ee afka ilmo-galeenka. Maaddaama mabda'a miyirka ah ay ka soo degto tan ugu horeysa ee xubinta taranka dumarka, waxay joogsataa riyada; ugu dambayntiina adduunkii iyo dareenkiiba way baaba'aan oo hurdadu way badataa.
Sida ugu dhakhsaha badan mabda'a miyirka leh ee bani'aadamka ayaa laga saaray diyaaradda jireed, durdurada magnetic ee dhulka iyo saameynta ku xeeran waxay bilaabayaan shaqadooda hagaajinta unugyada iyo qaybaha jirka. Iyada oo muruqyadu dejinayaan, oo jirkuna xasilloon yahay oo uu ku sugan yahay meesha saxda ah ee hurdada, ayaa hadda korantada iyo magnetic-ku waxay dib u habeyn ku sameyn doontaa oo ay ku soo celinaysa jirka iyo xubnaheedii xaalad isku dheelitiran.
Waxaa jira sayniska hurdada, taas oo ah aqoonta shuruucda xakameysa jirka ee la xiriirta maskaxda. Kuwa diida inay u hoggaansamaan sharciga hurdada waxay bixiyaan ciqaabtooda caafimaad, cudur, waali, ama xitaa geeri. Dabeecaddu waxay qortaa waqtiga hurdada, markanna waxaa eegta dhammaan xayawaankeeda oo aan nin ahayn mooyee. Laakiin ninku had iyo jeer wuu iska indhatirayaa sharcigan sida uu u arko kuwa kale, inta uu isku dayo inuu raaco raali ahaanshihiisa. Xiriirka wada jirka ah ee u dhexeeya jirka iyo maskaxda waxaa keena hurdo caadi ah. Hurdada caadiga ahi waxay ka timaadaa daalka dabiiciga ah ee jirka waxaana kudhaca booska saxda ah ee hurdada iyo xaalada maskaxda maskaxda ee horay u seexatay. Unug kasta iyo unug kasta oo jidhka ka mid ah, iyo sidoo kale jirka laftiisa, waa la oggolaaday. Jidhka qaar ayaa sifiican ugu muuqda dhaqankooda, kuwa kalena waa xun. Waxay kuxirantahay ururka jirka hadba meesha ugu fiican hurdada.
Qofkasta, sidaa darteed, waa inuu, halkii uu raaci lahaa qawaaniin kasta oo dejisa, uu ogaadaa meesha ugu fiican ee madaxiisu ku jiifo iyo dhinaca jirka uu ku jiifto. Qof kastaa waa inuu ogaadaa arrimahan naftiisa isaga oo khibrad u leh la tashiga iyo weydiinta jirka laftiisa. Arimahan waa inaan loo qaadin wax hiwaayad ah, oo wax laga sheego, laakiin loo eego qaab macquul ah oo loola tacaabo wixii dhibaato ah ee ay tahay inay ahaato: In la aqbalo haddii khibrad la soo diro, iyo in la diido haddii aan macquul ahayn, ama haddii khilaafsan la caddeeyo .
Sida caadiga ah, jirka oo si fiican loo habeeyay waa laqariyaa sidaa darteed madaxa waa inuu farta ku fiiqayaa dhanka woqooyi, iyo cagaha dhanka koonfureed, laakiin qibradu waxay tustay in dadku, si isku mid ah caafimaad qabaan, ay si fiican u seexdeen iyadoo madaxa farta lagu fiiqayo mid kasta oo ka mid ah seddexda jiho kale.
Inta lagu jiro hurdada jirka jirku si qasab ah ayuu u beddelaa booskiisa si uu ugu waafajiyo agagaarkiisa iyo hadda socda magnetic ee ka adkaanaya. Caadi ahaan, maahan wax wanaagsan in qofku u seexdo dhinaca jiifka xagga dhabarka, maadaama booska noocan ahi jidhka ka dhigto mid u furan saameyno badan oo waxyeello leh, haddana waxaa jira dad si fiican u seexda oo keliya marka dhabarkoodu jiifsan yahay. Mar labaad waxaa la yiri ma fiicna in la seexdo dhinaca bidix maxaa yeelay waxaa jira cadaadis wadnaha ah oo faragelinaya wareegga dhiigga, weli dad badani waxay doorbidaan inay ku seexdaan dhinaca bidix mana helaan wax faa iido ah oo ku soo kororta. Dadka anemic-ka ah ee darbigoodii markabku lumiyay codkoodii caadiga ahaa, ayaa inta badan xanuun dhabarka ah ku dhaca dhabarka markay toosayaan subixii. Tan waxaa badanaa loogu talagalay hurdada dhabarka. Jirka, haddaba, waa in lagu qanciyaa fikradda ah in la dhaqaajiyo ama la qabsado nafsaddeeda inta lagu jiro habeenkii oo loo beddelayo booska kaas oo u sahli doona fudaydka iyo raaxada ugu weyn.
Labada meelood ee nolosha ayaa ah inay si gaar ah ula macaamilaan ifafaalaha toositaanka iyo hurdada. Kuwani waa hayaha qorraxda iyo dayaxa. Ninku wuxuu neefsadaa hal sanka mar. Qiyaastii laba saacadood qoraxda hadda jirta waxay la socotaa neef ka soo baxa sanka saxda ah ilaa labo saacadood; ka dib waxaa jiraya isku dheelitirnaan daqiiqado ah oo neefsigu is beddelayo, ka dib marka dayaxu hadda hago hanuunka neefta ka baxaaya sanka bidix. Qulqulkaas neefsashada ah wuxuu kusii socdaa nolosha oo dhan. Waxay saameyn ku yeeshaan hurdada. Haddii neefsashadu ka fadhiisato oo ay ka baxdo sanka bidix, waxaa la ogaan doonaa in booska ugu habboon ee lagu seexdo ay tahay inaad jiifto dhinaca midig, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa neefsashada dayaxa inay si aan kala go 'lahayn uga gudubto sanka bidix. Laakiin haddii, taa bedelkeed, mid looga seexdo dhinaca bidix, waxaa la ogaan doonaa in tani ay beddeleyso kan hadda jira; Neefku wuxuu joogsadaa inuu ku socdo sanka bidix isla markaana wuxuu kuusocdaa sanka midig. Wareejinta hadda waxaa la ogaan doonaa inuu si dhaqso ah u dhacayo booska ayaa la beddelaa. Haddii qof seexan kari waaya inuu booska ka beddelo sariirtiisii, laakiin ha la tashado jidhkiisa siduu u doonayo inuu jiifsado.
Hurdo nasasho leh ka dib, ulaha dhammaan unugyada jirka ayaa tilmaamaya isla jihada. Tani waxay u oggolaanaysaa korantada iyo socodka magnetic inay si qumman u dhex maraan unugyada. Laakiin sida ay maalinba maalinta ka dambeysa fikraduhu u beddelaan jihada unugyada unugyada, iyo habeen ma jiraan wax unugyo ah oo joogto ah, maxaa yeelay waxay ku tilmaamaan jiho kasta. Isbeddelkaani waxa uu xannibayaa qulqulka nolosha hadda jirta, halka maskaxduna ay ku sii nagaaneyso kursikeeda maamulka ee xarunta dhexe ee habka dareemayaasha, jirka oo ah habka dareemayaasha jirka wuxuu ka hortagaa jirka in uu is dejiyo oo u oggolaado in dhawaqa magnetic uu unugyada unugyada ku sameeyo. . Hurdadu sidaas darteed waa lama huraan in unugyada lagu soo celiyo meeshii saxda ahayd. Cudurku unugyada unugyada ama jirka oo dhan waa iska soo horjeedaan.
Kii doonaya inuu si fiican u seexdo waa inuusan hawlgab isla markiiba ka dib markuu ka doodo su'aal, ama uu ku lug yeesho wadahadal xiiso leh, ama uu galo khilaaf, mana marka maskaxdu xanaaqsan tahay, xanaaqsan tahay, ama uu ku mashquulsan yahay wax danta ka nuugaysa, maxaa yeelay markaa maskaxdu maskaxdeeda waxay noqon doontaa mid ku mashquulsan sidaa daraadeed waxay marka hore diidi doontaa inay mawduuca ka baxdo waxayna taasi ka horjoogsanaysaa xubnaha iyo qaybaha jidhka inay is dejiyaan oo ay nasashada helaan. Sababta kale ayaa ah in ka dib markii maanka uu maaddada u qaado muddo, ay aad u adag tahay in laga fogaado, iyo in saacado badan oo habeen ah lagu bixin karo isku dayga laakiin ku guuldaraysta inuu "seexdo." Haddii maskaxdu si aad u badan ayaa loogala qaatay mowduuc, maaddooyin kale oo loo maleynayo inay ka soo horjeedaan dabiicadda ka soo horjeedda waa in la soo bandhigaa, ama buug la akhriyaa ilaa inta laga soo qaadayo mawduuca nuugista.
Ka dib howlgabnimada, haddii qofku uusan horay ugu go'aansan meesha ugu wanaagsan sariirta, waa inuu u seexadaa dhinaca midig booska ugu fudud uguna raaxada badan, nasiyo muruq kasta oo u oggolaanaya in qayb kasta oo jirka ka mid ah ay ku dhacdo booska ugu dabiiciga badan. Jirku waa inaan loo qaadin hargab ama kulaylkiisa, laakiin waa in lagu hayaa heerkul raaxo leh. Markaa qofku waa inuu qalbigiisa si naxariis leh ugu dareemo oo uu jirka oo dhan ku fidiyaa. Dhammaan qaybaha jirka waxay ka jawaabi doonaan oo ku farxi doonaan diiran deeqsi iyo dareen. Haddii mabda'a miyirku uusan markaa dabiici ahaan dib ugu noqon hurdo, dhowr tijaabo ayaa la isku dayi karaa si ay hurdada u huriyaan.
Mid ka mid ah hababka ugu caansan ee loo adeegsado hurinta hurdada ayaa ah in tirinta. Haddii tan la tijaabiyo mid waa inuu si tartiib tartiib ah u tiriyaa oo uu ku dhawaaqo lambar kasta Maskaxda si loo fahmo qiimaheeda isdaba jooga. Tani waxay leedahay saameynta daalista maskaxda maskaxda. Waqtiga boqol iyo shan iyo labaatanaad ayaa la seexdaa ayaa soo galaya. Qaab kale iyo mid noqon kara mid wax ku ool u noqon kara rabitaanka xoogan iyo sidoo kale dadka aadka u xun, waa isku dayga kor u fiirinta. Indhaha daboolku waa inay xirnaadaan oo indhuhu kor u socdaan xagga xoogga si looga jeediyo hal inji hal kor iyo ka dambeysa xididka sanka. Haddii mid uu u awoodo inuu tan u sameeyo sida saxda ah, hurdadu waxay badanaa ku dhacdaa dhowr daqiiqo gudahood, badanaana soddon ilbiriqsi gudahood. Saamaynta ay keento indhaha in kor loo jeediyo waa in ay ka goysaa unugyada nafsiyanka jir ahaan jirka. Isla markii dareenka loo jeediyo dabeecadda dhimirka maskax ahaan jirku waa lumiyaa aragga. Kadib riyo ama hurdo ayaa kugu soo dhaca. Laakiin sida ugufiican iyo sida ugu fudud ayaa ah in qofku kalsooni ku qabo kartida qofku u leeyahay hurdada iyo iska tuurista saameynta dhibta leh; Kalsoonidaan iyo si naxariis leh dareenka qalbiga hurdada ayaa soo socota waqti yar.
Waxa jira ifafaale jireed oo gaar ah oo inta badan hurdada ku weheliya. Neefsashada ayaa hoos u dhacday, halkii ay ka neefsan lahayd caloosha caloosha, ninku wuxuu ka neefsanayaa gobolka xiidmaha. Garaaca wadnaha ayaa taagnaada isla markaana waxqabadka wadnuhu si tartiib tartiib ayuu u yaraanayaa. Marar badan waxaa la ogaaday in ay jiraan kala duwanaansho cabir ah inta jirka uu hurdo. Qeybo ka mid ah jirka ayaa kordha cabirka, halka qeybaha kale ay yaraadaan. Xididdada dusha sare ee jirka ayaa sii ballaaranaya, halka marinnada maskaxda ay yaraadaan. Maskaxda waxay noqotaa midab jilicsan oo qandaraas yeelata inta lagu jiro hurdada, laakiin soo noqoshada mabda'a miyirka, waxay qabataa midab qurux badan oo midab leh oo midab leh. Maqaarku si firfircoon ayuu ugu firfircoon yahay hurdada marka loo eego gobolka soo jeedda, waana sababta ugu weyn ee sababta hawadu qolalka jiifka ay usii dheertahay uga dhakhsaha badan tahay xilliyada hurdada; laakiin inta maqaarka dhiiggu ku jiro, xubnaha gudaha waxay ku jiraan xaalad dhiig-yaraan.
Sababta kala duwanaanta cabirka qaybo ka mid ah jirka ayaa ah, markii mabda'a miyirku ka fadhiisto maskaxda, ficilka maskaxda ayaa hoos u dhaca, wareegga dhiigga ayaa hoos u dhaca, iyo, sida qeybta shaqada ee mabda'a miyirka, Maskaxda ayaa markaa nasanaysa. Maaha sidaas oo kale xagga jirka ee jirka. Sababta tan ayaa ah in maadaama ilaaliyaha jirka, mabaadiida miyirka, uu howlgab noqday xubnaheeda firfircoonna ay ku nasan doonaan, isuduwidda miyirka ee qaabka jirku wuxuu mas'uul ka yahay kana ilaaliyaa jirka khataraha badan ee uu u leeyahay waxaa la soo sheegaa xilliga hurdada.
Iyada oo laga duulayo khatarahaas badan ee maqaarka ayaa leh wareegga dhiigga oo kordha taas oo ka dhigaysa mid aad u nugul saameynta marka loo eego xilliga soo jeedidda. Gobolka soo kacaya ayaa dareemayaasha muruqyada iyo muruqyada iskaa wax u qabso ah ay gacanta ku hayaan jirka, laakiin markii mabaadii'da miyir qabta ee ninku uu howlgab noqdo, iyo nidaamka dareemayaasha matoorka ee xakameynaya murqaha iskaa wax u qabso iyo dhaqdhaqaaqa jirka ayaa xasilloon, dareemayaasha qasabka ah muruqyada jidhkuna way ciyaaraan. Tani waa sababta jidhka sariirta loogu wareejiyo hal boos oo loo wareejiyo meel kale, iyada oo aan la helin kaalmaynta mabaadiida miyir ee dadku. Muruqyada ikhtiyaariga ah waxay u dhaqaaqaan jirka kaliya sida uu farayo sharciyada dabiiciga ah iyo inay jirka u waafaqaan shuruucdaan.
Gudcurka ayaa u fiican inuu seexdo sababtoo ah dareemayaasha jirka ee wareega jirka ma saameeyaan gudcurka. Feejignaanta iftiinka dareemayaasha waxay u gudbineysaa aragtiyo maskaxda ah oo laga yaabo inay soo jeediso qaabab badan oo riyooyin ah, iyo riyooyinku badanaa waa natiijada sanqadha qaarkood, ama iftiinka jirka. Sawax kasta, taabasho ama aragti dibadeed, markiiba waxay keentaa isbeddel xagga cabirka iyo heerkulka maskaxda.
Hurdadu sidoo kale waxaa soo saaray maandooriyaha. Ma keenaan hurdo caafimaad leh, maadaama maan-dooriyaha ama daroogadu ay hoos u dhigayso dareemayaasha isla markaana ka jaraan mabda'a miyirka. Maandooriyeyaasha lama isticmaali karo marka laga reebo xaaladaha aadka u daran.
Hurdo ku filan waa in jirka la siiyaa. Tirada saacadaha looma dhigi karo qaab sax ah. Waqtiyada qaarkood waxaan dareemaynaa inaan qaboojinno ka dib hurdada afar ama shan saacadood ka badan intii aan qaadan lahayn waqtiyada kale labo jeer tirada. Xeerka kaliya ee la raaci karo sida dhererkiisu yahay hurdada waa in howlgab laga dhigo saacad macquul ah saacadna seexda illaa jirku ka tooso. Sariir jiifka jiifka badanaa waa wax faa iido badanaana waa dhib badan. Waqtiga ugufiican ee lagu seexdo, hase yeeshe, waa sideed saacadood laga bilaabo toban fiidkii ilaa lixda subaxnimo. Qiyaastii tobanka saac ayaa birlabku magnetic dhulku bilaabmaa inuu ciyaaro wuxuuna socdaa afar saacadood. Inta lagu jiro waqtigan, iyo gaar ahaan labada saacadood ee ugu horreysa, jirku wuxuu u nugul yahay kan hadda jira wuxuuna ku helayaa faa iidada ugu badan. Laba duhurnimo (AM) labaad ayaa bilaaba inuu ciyaaro kaasoo jidhka ku dallaca nafta. Waqtigan xaadirka ah wuxuu socdaa ilaa afar saacadood, sidaa darteed haddii hurdada la bilaabo tobanka aroornimo, laba ay yihiin dhammaan unugyada iyo qaybaha jirka oo is dejin lahaa ayna ku maydhan lahaayeen magnetic-ka xun ee hadda jira; marka la joogo laba koronto ayaa bilaabaya inuu kicinayo oo uu xoojiyo jirka, iyo illaa lixda galabnimo unugyada jirka ayaa lagu soo oogi doonaa oo lagu dhiirigelin doonaa si ay ugu dhaqaaqaan ficil oo isugu yeeraan feejignaanta miyirka maskaxda. .
Hurdo la’aanta iyo hurdo la’aanta ayaa ah nadaafad darro, maxaa yeelay jirku wuxuu sii shaqeynayaa oo ay xukumaan oo ay xakameeyaan dareemayaasha iskaa wax u qabso iyo muruqyada, dabeecadda ma saarin karto mana baabi'in karto waxyaabaha wasakhda ah, mana hagaajin karto waxyeellada jirka u geysatey xiritaanka nolosha firfircoon. Tan waxaa la samayn karaa oo keliya inta neerfayaasha iyo muruqyada qasabku ay gacanta ku hayaan jirka oo ay xukumaan dhaqdhaqaaq dabiici ah.
Hurdo xad dhaaf ah ayaa u xun sida hurdo kugu filan. Kuwa hurdada xad-dhaafka ah badiyaa waa kuwo maskax daalan oo caajis ah iyo dad caajis ah, caqli yar, ama calool jilicsan oo ku raaxeysta hurdada iyo cunidda. Kuwa daciifka ah ee tabarta daran si fudud ayaa loo daalaa, qof kasta oo da 'yar ayaa hurdo la’aan keeni kara. Kuwa hurdada badan kujiraa naftooda dhaawac, maadaama hurdo xad dhaaf ah ay weheliso firfircoonida xubnaha jirka iyo unugyada jirka. Tani waxay horseedaa dabakh, waxayna u horseedi kartaa cawaaqib xumo. Waxay keenaysaa in la joojiyo ficillada xameetida kaadi mareenka, iyo inta lagu gudajiro bile cabirkiisa dareeraha ayaa la nuugo. Hurdo xad dhaaf ah, adoo adeegsanaya codka wadnaha kanaalka maqaarka, waxay umuuqataa inuu adkaado calool fadhiga.
In kasta oo dad badani u malaynayaan inay ku riyoodaan inta lagu jiro muddada hurdada oo dhan, haddana taasi waa dhif in kiiska, oo haddii ay sidaas tahay, ay soo jeedaan daal iyo qanac la'aan. Kuwa si fiican u seexda waxaa jira labo xilli oo riyo ah. Midda koowaad waa marka awoodaha maskaxda iyo caqliga ay ku dhex qulqulayaan; Tani waxay sida caadiga ah socotaa dhowr ilbidhiqsi ilaa hal saac ah. Muddada labaad waa tii toosinta, taas oo, duruufaha caadiga ah, dhawr sekanno ama badh saacad ah. Dhererka muuqda ee riyada oo aan sinaba loo tilmaami karin waqtiga dhabta ah ee la lumiyay, maaddaama waqtiga riyada aad uga duwan yahay waqtiga waqti ahaan sida aan ku ognahay xilliga soo kacaya. Inbadan waxay ku riyoodeen riyooyin kaas oo riyada ku qaadatay sannado ama waqti nololeed ama xitaa da 'soo maray, halkaas oo ilbaxnimada loo arkay inay kacdo oo hoos u dhacdo, oo riyadii ku jirtey si xoog leh oo aan shaki ku jirin, laakiin markuu soo toosay wuxuu ogaaday in sannadaha ama da'doodu waxay ahayd dhowr ilbidhiqsiyo ama daqiiqado ka dib dhammaantiis.
Sababta loo kala qaado dhererka riyada oo leh waqti sidii aan ognahay, waxaa u sabab ah xaqiiqada ah inaan bareyney xubnaheena aragtida iyo caadaadka lagu qiyaaso masaafada iyo waqtiga. Mabda 'miyir qabka ah ee ka hawl gala adduun weynaha ayaa u arka jiritaanka xad la'aan, halka xubnaheena ay ku qiyaasayaan waqtiga iyo masaafada uu marayo wareegga dhiigga, iyo wareegga dareeraha dareemayaasha, maadaama loo adeegsaday xiriirka adduunka ka baxsan. Riyoodku waa kaliya in laga kaxeeyo mabda'a miyirka ah ka shaqeynta xubnaha jirka ee kore ee diyaaradda jirka loona gudbo shaqadeeda iyada oo loo marayo xubnaha gudaha ee diyaaradda maskaxda. Geedi socodka iyo marinka waxaa lagu arki karaa mabaadiida miyirka ah marka maskaxdu bartay sida ay iskaga fogeyso xubnaha iyo dareenka jirka.
Jirka guud ahaanba waa mid, laakiin wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, oo mid walbaa xaaladdiisu ku jirto xaalad ka duwan kan kale. Waxaa jira arrinta atomikada oo jirka oo dhami ku dhisantahay, laakiin loosoo agaasimay mabda'a naqshadeynta. Tani waa jir aan la arki karin. Ka dib waxaa jira jirka molikulalka, kaas oo ah mabda'a naqshadeynta astral kaas oo ay ku xiran yihiin taas oo atomadu kuxiran yihiin una qaabeyso jirka oo dhan. Ka dib waxaa jira jirka nolosha, kaas oo ah jir nafsi ah oo jiidaaya jirka molikalka. Weli kale ayaa ah waa jirka rabitaanka kaas oo ah muuqaal dabiici ah oo aan muuqan oo kuxiran dhamaan xubnayaasha kor ku xusan. Waxa intaa u dheer oo ay jiraan jidhka maskaxda, oo sida iftiinka u iftiimiya oo u sii maraya kuwii hore loo soo sheegay oo dhan.
Haddaba markii mabda'a miyirka ah ama jirka maskaxda uu ku shaqeynayo iyada oo loo marayo dareenka adduunka jir ahaaneed, sida jirka iftiinka wuxuu u weeciyaa iftiinkiisa dhammaan jirka kale wuuna iftiimiyaa oo kiciyaa iyaga iyo dareenka iyo xubnaha inay ficil sameeyaan. Ninkaas gobolka ayaa la sheegay inuu soo jeedo. Markii jirka iftiinka maskaxda loo rogo mudo dheer, dhamaan qeybaha hoose waxay kudhacey iftiinka mana awoodaan iney ka jawaabaan. Ilaa waqtigan waxaa lagu wareejiyay jirka iftiinka maskaxda maantana waxay noqdeen kuwa awood u leh jirka iftiinka ahna waxaa loo rogay jirka maskaxda maskaxda oo ah kursiga gudaha ee dareenka dibedda waxayna ka kooban tahay dareenka diyaaradda maskaxda. Markaa waa inaan ku riyoonno oo riyooyinku ay u kala duwan yihiin noocyo kala duwan; iyo riyooyinku waxay ka soo baxaan sababo badan.
Sababta qoob-ka-ciyaarka ayaa mararka qaar u sabab ah karti la’aanta qalabka dheef-shiidka si ay u shaqeeyaan, iyo u janjeerka in ay ku tuuraan sawirro la buunbuuniyey maskaxda, kuwaas oo lagu arko mabda'a miyirka ee maskaxda; shukaansi qoob-ka-ciyaarka waxaa sababi kara joojinta wareegga dhiigga ama nidaamka dareemayaasha ama goynta dareemeyaasha gawaarida dareemayaasha. Kala goyntaani waxaa sababi kara fiditaanka dareemeyaasha ama kala furfurida. Sababta kale waa galmo jirka la wareega. Tani ma ahan riyo ay soo saartay calool xumo ama khiyaano xun, laakiin waa dabeecad halis ah, waana in laga digtoonaadaa in laga hortago, haddii kale dhexdhexaadin ayaa laga yaabaa inay noqoto natiijada, haddii aysan waalli ahayn, oo waxaa la ogyahay in riyada noocaas ah ay mararka qaar keento geeri.
Somnambulist badanaa waxay u muuqdaan inay isticmaalaan dhammaan dareenka iyo awoodaha nolosha toosa ee caadiga ah, mararka qaarkoodna waxay muujin karaan isbadal aan lagu arkin nolosha tooska ah ee somnambulist. Qofka somnambulist-ka ahi wuu ka kici karaa sariirtiisa, dharkiisa, faraskiisa ayuu fuulaa oo si cadho leh ayuu ugu fuulaa meelaha uu ku sugan yahay inuusan isku deyi doonin inuu aado; ama waxaa laga yaabaa inuu si badbaado leh uga fuulo roobka dushiisa ama meelaha dhaadheer ee wajiga ka yaal halkaas oo ay waalli u noqon karto inuu ku mashquulo haddii uu soo jeedo; ama waxaa laga yaabaa inuu qoro waraaqo oo uu wadahadal la galo, laakiin ka dib markuu kaco gabi ahaanba kama warqabo waxa dhacay. Sababta somnambulism waxaa badanaa sabab u ah xakameynta iyada oo isku dubbaridaya mabda'a miyir-qabka ah ee qaabka jirka ee dareemayaasha iyo muruqyada iskeed u dhaqdhaqaaqa la dhaqaajiyo, iyada oo aan la faragalinayn mabaadiida miyirka ee maskaxda. Ficilkan somnambulistic waa saameyn uun. Sababta waxa keena iyada oo loo marayo geedi socodyo fikir qaas ah oo horay u dhacay, ha ahaadee maskaxda jilaaga ama fikirka qof kale.
Somnambulism waa nooc hypnosis, sida caadiga ah sameynta fikradaha qaarkood oo lagu soo jiiday qaab ahaan jirka, sida marka qofku si ba'an ugu fikiro ficil ama wax uu ku soo jiito fikradahan qaabaynta ama qaabka mabda'a jirkiisa jir. . Hada markii qofku aad u soo jiitay mabda 'qaabkiisa isla markaana uu hawlgab noqdo habeenki, mabda' miyirkiisu wuu ka baxayaa kursigiisa maamulka iyo xarunta maskaxda isla markaana dareemayaasha iyo muruqyada iskaa wax u qabso ayaa nasanaya. Markaa waa in neerfayaasha iyo muruqyada iskood isu yimaadda ay mas'uul ka noqdaan. Haddii kuwan si ku filan loogu dhiirrigeliyo aragtiyaha ka soo baxa mabda'a fikirka inta ay ku sugan yihiin gobolka soo kacaya, waxay si otomaatig ah u hoggaansan yihiin fikradahaas ama aragtiyadan sida xaqiiqada ah maadada hypnotized u adeecsan hawl wadeenkiisa. Sidaas darteed feats duurjoogta ah oo uu sameeyo somnambulist badanaa waa sameynta riyo maalinle ah oo lagu goynayo jirka qaabkiisa inta lagu jiro gobolka soo kacaya, taasoo muujineysa in somnambulistu ay tahay mawduuc isbarbardhig ah.
Laakiin is-miyir-qabka laftiisu had iyo jeer ma aha natiijada riyo maalmeed, ama fannaan duurjoogta ah, ama fikirka ah inuu nolosha toosiyo oo keliya. Mararka qaarkood mabda'a miyirku wuxuu ku jiraa mid ka mid ah gobollada riyada qotada dheer wuxuuna u gudbiyaa aragtida gobolka riyada qotodheer u ah isku dubbaridida mabda'a miyir-qabka ah ee qaab dhismeedka. Kadibna, haddii jirkani u dhaqmo sida dareenka loo helay, ifafaaleynta somnambulism waxaa lagu soo bandhigayaa qaab ciyaareedyo aad u adag oo adag, sida kuwa u baahan hawlgal maskaxeed xagga xisaabinta xisaabta. Kuwani waa laba sababaha sababaha somnambulism, laakiin waxaa jira sababo badan oo kale, sida labnimada shaqsi ahaaneed, jahwareer, ama adeecidda ereyada qof kale, kaasoo hypnotism ku hoggaamin kara jirka qofka somnambulist-ka ku shaqeeya ee tooska ah. .
Hypnosis waa nooc hurdo ah oo ay keento rabitaan mid ku shaqaynaya maskaxda mid kale. Isla ifafaale kaas oo hurda hurdada dabiiciga ah waxaa soo saaray cilmi-baaris farshaxanimo yaqaan hypnotist-ka. Waxaa jira habab badan oo ay raacaan hypnotists, laakiin natiijooyinku waa isku mid. Isku-buuqa 'hypnosis' wuxuu shaqaaluhu keenayaa daal xagga indhaha ah, indho-la’aan guud, iyo soo-jeedin, ama ku talin doono wuxuu ku qasbi doonaa mabda'a miyir-qabka ah ee mowduuca inuu ka baxo kursiga iyo xarunta maskaxda, sidaasna ay u xakameyso dareemaha qasabka ah. muruqyada jirku way is dhiibeen, iyo mabda'a miyirku wuu ka go'anyahay xarumihi maskaxda iyo xarumaha dareenka, wuxuuna ku dhacaa hurdo qoto dheer. Ka dib howl wadeha ayaa badalaya maskaxda qofka kale waxa uuna cadeynayaa dhaqdhaqaaqa qaabka mabda'a jirka ee xakameynaya dhaqdhaqaaqa qasabka ah. Qaab-dhismeedka qaabkani wuxuu si dhakhso leh uga jawaabayaa fekerka hawlwadeenka haddii maaddada ay tahay mid wanaagsan, oo maskaxda qofka hawl-wadeenka ahi ay tahay laf-dhabarta jidhka waxa u ah mabaadiida miyir-qabka ee maanka.
Mawduuca hypnotized wuxuu soo bandhigi karaa dhammaan ifafaalaha somnambulism waxaana laga yaabaa in xitaa loo sameeyo ficillo cajiib ah oo adkeysi ah maxaa yeelay hypnotist-ka ayaa abuuri kara jaangooyooyinkaas oo kale oo uu jecel yahay in maaddada la sameeyo, halka dhaqdhaqaaqa somnambulist-ku ay kuxirantahay fikirkii hore, wax alla wixii ay noqon lahaayeen. Mid ka mid ah waa inaan waligiis xaalad kasta ama xaalad soo gudbin in la hypnotized, maadaama ay u egtahay inuu isaga iyo jidhkiisa ka dhigo wax kasta oo saameyn ah.
Waa suurta gal in qofku ka faa iideysto isdabamarinta haddii si caqli ah loo sameeyo. Adiga oo amar ku siinaya jirka inuu sameeyo howlo gaar ah ayaa si aad ah loogu soo qaadi doonaa iyadoo la raacayo saameynta hal sabab uun, waana ay u fududaan doontaa mabda'a caqli galka in la jiheeyo ficillada hal qof nolosha iyo jirka haddii jirka waxaa loo tababaray sida looga jawaabayo mabda'a sababaynta marwalba. Mid ka mid ah hawlgallada noocan oo kale ahi waa hurdada subaxnimo waqtigaas oo maskaxdu ku amartay jidhka inuu toosiyo ka hor hawlgabka, iyo in sida ugu dhakhsaha badan ee soo tooso oo dhaqso u maydho oo loo xidho. Tan waxaa loo sii qaadi karaa iyada oo lagu amrayo jirka in uu qabto shaqooyinka qaarkood waqtiyada qaarkood ee maalinta. Goobta loogu talagalay tijaabooyinka noocan oo kale ah wey weynaataa jirka oo dhan ayaa laga nugul yahay haddii amarradan marka hore la bixiyo habeenkii kahor hurdada.
Waxaan ka helnaa faa iidooyin badan hurdada, laakiin sidoo kale waxaa jira qatar.
Waxaa jira halista lumitaanka dardaaranka inta lagu jiro hurdada. Tani waxay u noqon kartaa carqalad aad u weyn kuwa isku dayaya inay ku noolaadaan nolol ruuxiga ah, laakiin waa in lala kulmaa oo laga adkaadaa. Markii nadaafadda jirka la ilaaliyo muddo go'an, jirkaasi wuxuu noqdaa shay soo jiidasho u leh qeybo badan oo ka mid ah hay'adaha iyo saameynta adduunka aan la arki karin ee dareenka. Kuwani jirka waxay u dhawaadaan jirka habeenkii iyo hurdada waxeey ku dhaqmayaan mabaadiida isuduwida ee miyirka ee qaabka jirka, kaas oo xakameeya dareemayaasha qasabka ah iyo murqaha jirka. Ku dhaqaaqida mabda'a qaab-dhismeedka jirka, xarumaha dabiiciga ah waa la kiciyaa oo la kiciyaa, waxaana ku xiga natiijooyin aan loo baahneyn. Luminta muhiimada ayaa si macquul ah loo joojin karaa iyo saameynta ay ku keento in laga hor istaago soo dhawaanshaha. Qofka miyir qabta inta lagu jiro hurdada jidhka, dabcan, wuxuu reebaayaa dhammaan waxyaalahaas iyo waxayaabaha kale oo dhan, laakiin kii aan miyir qabin ayaa waliba is ilaalin kara.
Guul darrooyinka muhiimka ah badanaa waa natiijada fikradaha qofku inta uu nool yahay, ama afkaarta maskaxda gelisa oo uu dhageysto. Kuwani waxay soo jiitaan qaab mabda 'isku xirnaaneed oo, sida jidhka somnambulistic, waxay si otomaatig ah u raacaysaa laabta fikirka ee ku qotonta. Ha, markaa, qofka naftiisa ku ilaalin lahaa hurdada ha ku ilaaliyo maan daahir ah noloshiisa toosiyo. Halkii uu ka madadaalin lahaa fikirradiisa ka soo baxay maankiisa, ama dadka kale u soo jeedin kara, ha u diido iyaga, oo hoos u dhigta dhagaystayaasha oo diida inuu wejigiisa arko. Tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan isla markaana horseedi doonta hurdo caafimaad iyo waxtar leh. Luminta muhiimada ayaa mararka qaar u sabab ah waxyaabo kale oo aan ahayn fikirkaaga gaarka ah ama fikirka kuwa kale. Tani waa laga hortegi karaa, in kasta oo ay wakhti qaadanayso. Qofkii dhibaataysan ha u qayliyo jirkiisa inuu u yeedho caawimaad markay wax khatar ahi soo dhowaato, oo weliba ha ku dacweeyo mabda'diisa caqliga leh inuu ku amro booqde kasta oo aan soo dhoweynaynin inuu baxo; waana inay noqotaa haddii amar sax ah la bixiyo. Haddii qof qafiif ah uu riyo ku muuqdo, waa inuu weydiiyo: yaad tahay? Yaad tahay maxaad dooneysaa? Haddii su'aalahan si xoog ah wax loo weydiiyo, ma jiro cid diidi karta inay ka jawaabto, naftooda iyo ujeedkoodana sameyso yaqaan. Markii su’aalahan la waydiiyo booqdaha, qaabkeeda qurxoon ayaa inta badan boos ka siisa qaab aad uxun, kaas oo, taas uga xanaaqay sidaa darteed lagu qasbay inuu muujiyo dabeecaddiisa dhabta ah, xanaaq ama xanaaq iyo si aan raali ku aheyn.
Adigoo maskaxda ku soo eedeeyay xaqiiqooyinka kor ku xusan, iyo si looga hortago khatarta la mid ah ee hurdada, qofku waa inuu ku fariisto inuu yeesho qalbi qabow qalbiga oo uu ku fidiyo jirka oo dhan ilaa unugyadu ay ku farxaan diirimaad wacan. Isaga oo ka duulaya jirka, jirka oo xarun u ah, ha ka dhaadhiciyo jawiga ku xeeran in lagu soo oogo fikir naxariis leh oo dabeecad wanaag ah, kaasoo ka soo baxa isaga oo buuxiya qayb kasta oo qolka ah, sidoo kale iftiinka ka soo ifbaxaya koronto koronto. Tani waa jawi u gaar ah, oo uu ku hareereysan yahay oo uu ku seexan karo halis la'aan. Khatarta kaliya ee markaa imaanaysa isaga ayaa noqon doonta fikradaha ay yihiin caruurtu maskaxdiisa. Dabcan, xaaladdan lama gaadho hal mar. Waa natiijada ka soo baxda dadaalka joogtada ah: edbinta jirka, iyo edbinta maskaxda.
Waxaa jira zodiac hurdo ah oo waxaa jira zodiac of toosi. Zodiac-ka nolosha soo toosa waa kansarka ('™ ‹ï¸Ž) ilaa xiddigta (' ™ 'ï¸Ž) hab maktabadda (' ™ Žï¸Ž). Soodhadhka hurdada ee hurdada ayaa ka soo bilaabma ('™' ï¸Ž) ilaa kansar ('™ ‹ï¸Ž) habka aries' a (a). Astaamahayaga noloshu waxay ku bilaabataa kansarka ('(‹ï¸Ž)', neefsashada, oo leh astaamaha koowaad ee miyir-qabka. Waa bixitaankii ugu horreeyay ee ka imanaya xaaladda hurdo qoto dheer ee aroorta ama nasashada maalinlaha ah ka dib. Xaaladdan oo kale midna caadiyan kama warqabo qaababka ama faahfaahinta nolosha soo toosa. Waxa kaliya ee qofku miyir qabo waa xaalad deggan oo xasilloon. Ninka caadiga ah waa dowlad aad u deggan. Laga soo bilaabo halkaas, mabda'a fikirka wuxuu u gudbaa xaalad dareen badan leh, oo wakiil ka ah calaamadda leo (â ™ Œï¸Ž), nolosha. Gobolkan midabbo ama walxo dhalaalaya ayaa la arkaa oo socodka iyo culeyska nolosha ayaa la dareemaa, laakiin sida caadiga ah iyada oo aan la hayn qeexitaan qaab ah. Maaddaama maskaxdu ay dib u bilaabato xiriirkeedii ay la lahayd xaaladda jireed waxay u gudubtaa aagga astaanta (â ï¸Ž ï¸Ž), qaab. Xaaladda jirta ayaa ah in dadka intiisa badani ay ku riyoodaan ku soo laabashada noloshooda toosa. Foomamka halkan si cad ayaa looga arkaa, xusuusta hore ayaa dib loo eegay, iyo aragtiyo qusaysa dareenka jidhka ayaa sababa in sawirro lagu tuuro maskaxda maskaxda; Meesha uu ka fadhiisto maskaxdu waxay ka eegtaa aragtidan iyo soojeedinta dareenka waxayna u tarjuntaa dhamaan riyooyinkasta. Laga soo bilaabo gobolka riyadaan waxaa jira hal talaabo oo nolosha lagu toosiyo, ka dibna maskaxdu waxay toosaysaa dareenka jirkeeda ee maktabadda calaamadda ('™ Žï¸Ž), galmada. Calaamadan waxay dhex mareysaa dhammaan howlaha nolol maalmeedka. Ka dib markay jidhkeedii ka soo muuqatay calaamadda maktabadda ('™ Žï¸Ž)', galmada, waxay damacyadeedu ka muuqdaan calaamadda scorpio ('™ ï¸Ž)', rabitaan. Kuwani waxay la xiriiraan oo ay ku dhaqmaan fikradaha caadiga ah ee toosinta nolosha, ee calaamada sagittary (â ™ ï¸Ž), fikirka, kaasoo sii socda ilaa maalinta iyo ilaa waqtiga mabda'a maskaxda ee maskaxda dib ugu laabto laftiisa oo joogsada. in aduunka laga warhayo. Tani waxay ka dhacdaa astaanta xiisaha ('™' ï¸Ž), shaqsiyan. Capricorn ('™' ï¸Ž) wuxuu matalaa gobolka hurdo qoto dheer wuxuuna saaran yahay diyaarad la mid ah kansarka (â ™ ‹ï¸Ž). Laakiin halka 'capricorn' ('™' ï¸Ž) uu ka dhigan yahay u jeedidda hurdada dheer, kansarka (â ™ ‹ï¸Ž) wuxuu metelaa soo bixitaankeeda.
Zodiac hurdada waxay ka bilaabmaysaa xijaab ('™' ï¸Ž) ilaa kansar ('™ ‹ï¸Ž) habka aries' a (a). Waxay matashaa aduunyada oo aan la muujin karin ee hurdada, maaddaama qeybta hoose ee soodiyadu ay u taagan tahay adduunka muuqata ee nolosha soo jeedda. Haddii qofku u gudbo xaaladdan aan muuqan ka dib marka uu shaqada ka fadhiisto waxa uu ku nastay soo kicinta waayo wuxuu ku jiraa xaaladdan hurdo qoto dheer, haddii loo soo maro hab habsami leh, wuxuu la xidhiidhaa astaamaha iyo awoodaha sare ee nafta oo hela Waxbarid la siinayo isaga oo u sahasha inuu shaqada qabto maalinta ku xigta iyadoo la cusbooneysiinayo xoog iyo farxad, oo uu ku fuliyo takoor iyo adkeyn.
Soodhadhka hurdada ee hurdadu waa gobolka noumenal; zodiac toosan wuxuu matalaa adduunka ifafaalaha. Goobaha hurdada ee qofku shakhsiyan kama gudbi karo calaamada 'hurricorn' ama hurdo qoto dheer, haddii kale waa laga joogsanayaa inuu noqdo shakhsiyadda. Wuxuu ku sii jiraa xaalad xasillooni darro ilaa uu ka soo tooso kansarka (™ ™ ‹ï¸Ž). Shakhsiyanka ayaa sidaas darteed ka helaya dheefaha zodiac hurdada marka shakhsigu uu xasilloon yahay. Shakhsiyaddu waxay markaa ku soo jiidanaysaa shakhsiyadda dhammaan faa'iidooyinka laga yaabo in ay hesho.
Mid ka mid ah baran lahaa zodiac ee hurdada iyo hurdada, waxaan u jeedin lahayn jaantusyada badanaa la galiyo Word The. Eeg Word The, Xajmiga 4, Maya. 6, Maarso, 1907, Iyo Xajmiga 5, Maya. 1, Abriil, 1907. Sawirada 30 iyo 32 waa in laga fekeraa, maaddaama ay soo jeedin doonaan noocyada iyo heerarka kala duwan ee hurdada iyo hurdada ee uu mid kastaa ku gudbo, marka loo eego taam ahaanshihiisa, duruufaha iyo karma. Labada tirooyinkaas waxaa lagu matalay afar nin, saddex ka mid ah ragga waxaa ku jira nin weyn. Ku dabaqan mowduuca qoraalkan, afartaas nin waxay metelaan afarta dowladood ee laga soo gudbay laga soo tooso ilaa iyo hurdada dheer. Ninkii ugu yaraa iyo kii ugu horreeyayba waa muuqaal jir ahaaneed, oo taagan maktabadda (™ Žï¸Ž), kaasoo jirkiisa ku xaddidan diyaaradda budo-scorpio (™ ï¸Ž ï¸Ž “™ ï¸Ž ï¸Ž), qaab iyo rabitaan, of zodiac weyn. Sawirka labaad waa ninka maskaxda, oo uu ku dhexjiro ninka jirka. Ninkani maskaxdu wuxuu matalaa gobolka riyada caadiga ah. Muuqaalkan riyadeed ee caadiga ah, iyo sidoo kale ninka maskaxda wax ka qaba, wuxuu ku kooban yahay calaamadaha leo-sagittary (â € â Œï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž) ee qofka ruuxiga ah, iyo calaamadaha kansarka-capricorn (™ ™ ‹ï) Of¸Ž ¸Ž ™ ï¸Ž ï¸Ž the the and it the the the the ï¸Ž ï¸Ž the ï¸Ž theï¸Ž the theï¸Ž of the of of the of ï¸Ž ï¸Ž the ï¸Ž the the ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž the ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž the the the the the the ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž ï¸Ž mental the the the the, the the the) Maskaxda ninka, oo waa kan adduunyada maskaxdu in ninka caadiga ahi ku riyoodo. Gobolkan, linga sharira, oo ah nashqadeynta ama qaab dhismeedka, waa jirka loo isticmaalo oo lagu riyoodo. Kuwa khibrad u leh riyooyinku waxay u aqoonsadaan gobolkan mid aan lahayn dhalaalaya ama midab kala duwan. Foomamka ayaa la arkaa oo la damacaa, laakiin midabada ayaa ka maqan foomamkuna waxay umuuqdaan inay yihiin hal hue, oo cawlan ama qaab xariir ah. Riyadahan sida caadiga ah waxaa soo jeediya afkaarta maalintii hore ama dareenka jirka ee waqtigaas. Gobolka riyada dhabta ah, si kastaba ha noqotee, waxaa calaamad u ah waxa aan haysano, qodobbada kor ku xusan, ee loo yaqaan ninka maskaxda. Ninka maskaxda ku jira ee zodiac maskaxdiisa waxaa ku jira ragga maskaxda iyo jirka ee zodiacskooda. Ninka maskaxdiisa zodiac wuxuu kusocdaa diyaaradda leo-sagittary (â € â Œï¸Ž “,-), fikirka nolosha, ee zodiac-ka weyn. Kani wuxuu saaran yahay diyaaradda kansarka loo yaqaan 'kansar-capricorn (' '' '' '' '' '' 'zinoac' 'oo ah mid ku xidhan dhexda ninka ruuxiga ah. Waa ninkan maskax ahaaneed ee ku jira oo xadidaya dhammaan heerarka nolosha riyo ee uu ka helay ninka caadiga ah. Kaliya xaalado aan caadi aheyn oo qofku ka helo isgaadhsiin miyir qabta ninka ruuxiga ah Ninkani maskaxda ahi waa jirka riyada dhabta ah. Waa mid aan ka muuqan qofka caadiga ah, isla markaana aan lagu qeexin noloshiisa soo jeedinta, inay ku adag tahay inuu ku dhex shaqeeyo si miyir iyo caqli leh, laakiin waa jirka uu ku gudbo muddadii uu jannada ku jiray dhimashadii ka dib.
Daraasad tirooyinka 30 iyo 32, waxaa la arki doonaa in xagalka xagal qumman ee xagjirka ah ay quseyso dhammaan soodhadhka, mid walbana noockiisa, laakiin khadadka (™ ï¸Ž ï¸Ž “™ Žï¸Ž Žï¸Ž) iyo ((™ Žï¸Ž € €) “'™' ï¸Ž) waxay dhex martaa dhammaan soodhadhka isla astaamaha la midka ah. Khadadkaani waxay muujinayaan xiriirka ka soo kacaya nolosha toosa iyo bixitaankiisa, imaatinka jirka iyo bixitaankiisa. Tirooyinku waxay tilmaamayaan in ka badan inta laga dhihi karo.
Kii ka faa'iidaysan lahaa hurdada - kaas oo faa iidaysan doona noloshiisa oo dhan wuxuu ku fiicnaan lahaa inuu haysto shan iyo toban daqiiqo illaa saacad si uu uga fikiro ka hor hawlgabka. Qofka ganacsadaha ah wuxuu u muuqan karaa waqti lumis ah inuu qaato saacad uu ku fekero, inuu iska fadhiyo xitaa shan iyo toban daqiiqo waxay noqon doontaa mid xad dhaaf ah, weli isla ninkaas ayaa u malayn doona shan iyo toban daqiiqo ama saacad masraxa inay aad u gaaban tahay si loogu oggolaado isaga madadaalo fiidkii.
Mid ka mid ah ayaa heli kara khibrad ahaan ka fiirsashada illaa iyo inta uu ka gudbi karo kuwa uu ku jecel yahay tiyaatarka, sida qorraxdu ugu badasho iftiinka mugdiga iftiinka saliidda. Marka aad ka fakareyso, ha noqoto shan daqiiqo ama saacad, mid ha u fiirsado oo cambaareyno ficiladiisa khaldan ee maalinta, oo ha ka mamnuuco ficilladaas ama kuwa kale sida berri dambe, laakiin ha oggolaado waxyaabaha si wanaagsan loo qabtay. Ka dib ha u hagto jirkiisa iyo qaabkeeda qaab ahaan sida loo ilaaliyo habeynta habeenkii. Sidoo kale ha ka fiirsado waxa maskaxdiisu tahay, iyo waxa isaga laftiisu ay tahay mabda 'miyir leh. Laakiin ha uu go'aansado oo uu go'aansado inuu ka warqabo riyooyinkiisa iyo hurdadiisa; wax walbana ha ku go’aansado inuu si joogto ah miyir u yeesho, mabaadiida miyirkiisa, iyo mabaadiida miyirkiisa si loo helo "miyir-qabka".